I-LG V40 ivuza kwiGeekbench ngaphandle kwePie ye-Android | I-Androidsis
Kwiveki ezayo, i-LG iyakusityhilela i-LG V40 kuthi, njengoko kulindelwe. Amarhe aliqela kunye nokuvuza okuveliswe kangangeeveki kwesi sixhobo, basishiyela igumbi elincinci lokumangaliswa ngomhla wentetho yalo. Nangona kunjalo, Inqaku elinomdla malunga nale fowuni yokusebenza ephezulu iyaqhubeka nokuvela, njengale sithetha ngayo apha ngezantsi.
Ngokwento ebhaliswe nguGeekbench kwiziko ledatha, iflegi elandelayo yenkampani yaseMzantsi Korea Iya kuxhotyiswa ngeyona processor iphambili yeQualcomm. Ukongeza, ikwabonisa ubungakanani bayo be-RAM kunye nenkqubo yokusebenza.
I-LG V40 ivuza amanqaku ebhentshini kunye ne-Android 8.1 Oreo njenge-OS. Oku kunokuba yinto edanisayo, kwaye nangakumbi ukuba sithathela ingqalelo ukumiliselwa kwangoko kwenguqulelo yamva yale nkqubo yokusebenza, eyi-Android 9.0 Pie. Ngokucacileyo, kungenxa yokuba iza neyokugqibela, kodwa, kuyabonakala ukuba, inkampani ayinayo ukuba icwangcisiwe ngaloo ndlela, ngelishwa kubathengi abaninzi abalinde ukumiliselwa kwale smartphone.
Kuluhlu, siyabona ukuba Inkqubo-kwi-Chip Snapdragon 845 evela kwiQualcomm ijongene nokuhambisa iziqwenga ngaphakathi. Le processor ye-octa-core yenkqubo ye-10 nm kunye noyilo lwe-64-bit iyakwazi ukufikelela kwi-max. 2.8 GHz.
UGeekbench ukwasityhilele oko I-LG V40 ine-6 ​​GB yememori ye-RAM, isixa esamkelekileyo esiza kuthi sixhase i-SD845 kakuhle. Ngaphandle koko, kufunyenwe amanqaku aqikelelweyo kuluhlu lwayo: 2.425 kwicandelo elinye lesiseko kunye ne-8.769 kwicandelo le-multi-core. Abothusi, kodwa, ngendlela efanayo, ngamaxabiso aphezulu aqinisekisa ukuba ifowuni inamandla amakhulu kwaye iya kuba nakho ukuqhuba ii -apps ngemfuno ephezulu yezixhobo kunye nemidlalo enzima kakhulu, ngaphandle kwengxaki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-LG V40 ivela kwi-Geekbench ngaphandle kwe-Android 9.0 Pie
Uismael ramon Saracho sitsho
Ukuba kumnandi ukufumana ulwazi kwii-mobiles ezibonakala zintle kakhulu kodwa kubo ukuba bafike kwilizwe lam elincinci (i-Uruguay) kwaye ngamaxabiso afanelekileyo kubonakala kunzima hahaha.
PS Kulunge kakhulu, ulwazi lusinika ukwazi ukuba sisesemva.
Phendula ku-ismael ramon Saracho
Eyona ndlela yokukhuphela uluhlu lwe-m3u